गर्भावस्थाको बखत हेमोररोइजहरूको क्रीम
कहिले पनि दुःख भोग्नु परेको थिएन, एउटा सानो बम्प एकदमै देखिन्छ, लक्षणहरूबाट एकदम कडा पीडा छ, रगत छैन। उसको अवस्थालाई कसरी सहज पार्ने व्यवहार गर्नुभयो? 1 त्रैमासिकको अन्त्य2ग्राम सुरु भयो। उजु राहत एक पटक उपचार गरीयो, तर उनले पढ्छन्, गर्भावस्था3टेटिटरमा मात्र देखाउँछन्:
ट्यागहरू: महिलाहरूको समीक्षाको लागि बमोजिमबाट एक प्रभावी उपकरण, रक्तस्राव हेमोरहोलिडको साथ एक रेडियल मलम, कसरी हेमोरहोलिडहरूको उपचारको लागि मैनबत्तीहरू बनाउने।
राहत मठँ जब रक्तस्राव रक्तस्रावहरू
गर्भवती महिलाहरुमा। धेरै जसो युवतीहरू एकदम स्पष्टसँग कल्पना गर्दैनन्, र डाक्टर गर्भावस्थामा हदसम्म हजुरआमाको साथ केही गर्दैनन्। उनी पनि गर्भावस्थामा र अस्पतालमा देखा पर्यो, डाक्टरले भने कि यो उपचार गर्न बेकार छ। ऊ लोडको कारणले हो जुन मसँग2हो टेटिटर छ, जुन हेमोरहोलिड हो। मेरो डाक्टरले भने। कि यो गर्भावस्थाको बखत अक्सर घटना थियो, मुख्य कब्जले अनुमति दिँदैन। मलाई डुप्लेक र Glycerin मैनबत्तीहरू तोकियो। खैर, आहार कब्ज निर्धारित छैन।
हेमोरहोलिसका कारणहरू गर्भावस्था2त्रैमासिकको बखत गर्भवती निदान हेब्रुपर्थीहरू गर्भावस्था2त्रैमासिकको उपचारमा गर्भवती निदान। कसरी र कसरी शवरोरुनमा Hymorrowids को उपचार गर्ने। केटीहरू, तर सूर्य पनि हो, to त्रैमासिक। विन्डोजमा शीर्षक खोल्नुहोस्। IMBH अब उपचार राजक्षेपबारी भन्दा रेमोर्होइड्स चैपरको उपचार को लागी नगर्नुहोस् म इन्टरनेटमा रोप्दछु र मेरो स्ट्याक र जोखिममा हेप्रोइन मलम प्रयोग गर्न थाल्छु, कसरी तपाईंको अवस्थाको शर्तको लागि सहज बनाउन थाल्यो?
1 त्रैमासिकको अन्त्य, तपाईंले गर्भावस्थाको क्रममा कारकेसजाइन जेल प्रयोग गर्नुभयो, पूरै गर्भावस्थाले कब्ज र एक हप्ता अघि सतावट र एक हप्ता अघि समस्या देखायो!
मंगेड रेटराल राहत एल्जेरा / LI>
सामान्यतया, विचार अन्तर्गत रोग, हेमोररुडहरू धेरै नतिजा र गर्भवती महिलाको लागि सबैभन्दा राम्रा संवेदनाहरू समावेश हुन्छन्। यो उपत्रले सामान्य र सही साक्षात्कार रोक्छ, मानव शरीरको पछाडि गुरुत्वाकर्षण र अत्यधिक दुखाइको कारण। थप रूपमा, यी सबै एक शक्तिशाली खुजलीको साथ छ।
सबै भन्दा सामान्य साधन निर्दिष्ट गरीएको मामिलामा सबैभन्दा सामान्य साधन गर्भावस्थाको राहत हो। यो प्रश्नको उत्तर दिन मात्र बाँकी छ: "के यो तपाईंको आफ्नै स्वास्थ्य र भविष्यको बच्चाको लागि डर बिना राहत प्रयोग गर्न सकिन्छ?"
<< p> त्यहाँ ड्रग्स तैंडले मैनबत्ती र मन्डि of को रूपमा फार्मेसी पोइन्टहरूमा बिक्री गरिएको छ। यसको सारबाट, जब औषधि रोकिरहेको प्रभावका प्रभावहरू र रक्त प्रभावको लागि औषधि स्थानीय पेनकीली र रगतको साथ औषधी प्रदान गरिन्छ।
यो ध्यान दिन लायक छ कि गर्भावस्था हेमोरहोलिडहरूको समयमा। र यो राम्रो छैन, किनकि त्यहाँ यस्तो साझेदारी गरिएको स्थितिमा बिल्कुलै कुनै पनि महिला छन्, अधिक कम्पोनेन्टहरूको प्रयोगको साथ अधिकतम हुनुपर्दछ।
निर्माणका अनुसार एन्टियोहेमहाइचर्ड्रल उपचारको प्राकृतिक संरचना छ। त्यसकारण, संलग्न निर्देशनले प्रमाणित गरेझैं साइड इफेक्टहरू न्यूनतम हुन्छन्। Onderedientstive औषधीको मुख्य अंश पानी शार्क लिभर तेल हो। औषधीय उद्देश्यमा यस्तो घटक दुई शताब्दी अघि प्रयोग गरिएको थियो। एकै साथ यस्तो अवस्थामा यस्तो तेलले घाउमा द्रुत उपचारको लागि योगदान पुर्याउँछ, जबकि सूचित प्रक्रिया गठन को संभावना कम कम।
यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि यो निर्देशनले अझै पनि यो तथ्यलाई नोट गर्दछ कि बच्चाको numing को समयमा उपचार को उपयोग धेरै सावधानी को लागी लायक छ। धेरैजसो चिकित्सा पेशेवरहरू वास्तवमा यस औषधिको नियुक्तिबाट बच्नबाट बच्न सक्छन्, किनकि उनीहरूको विश्वास छ कि राहत नकारात्मक रूपमा इन्ट्रान्डर फलले असर गर्न सक्छ। अन्य चीजहरू मध्ये, डाक्टरहरू मातृ-रगतमा कम्पोनेन्टहरूको सम्भावित भूमिकामा औंल्याउँछन्, र त्यसपछि भविष्यको रगतमा अहिलेसम्म जन्मेको बच्चाको रगतमा। हाल, औषधि पूर्ण रूपमा अध्ययन गरिएको छैन।
<< p> यो औषधि गर्भावस्थाको बखत फेला पार्न सकिन्छ। मैन -मा मजबूत वा मैनमा राहत मात्र प्रयोग गर्नको लागि। राहत, मलगारी र मैनबत्तीहरूको लागि, हेमोररोइडोल नोडहरू हटाउँछ, समुद्री buckthharne तेल (मैनबत्ती) मा कुनै पनि मद्दत गर्दैन!
<< p> मसँग पहिलो गर्भावस्था पछि हेमोरहोलिडको रूपमा एउटा उपहार छ। गत बर्षमा विचलित छैन3.. तर हप्ताहरू गर्भावस्था र मअधिक मैनबत्ती गर्भाववात र मअधिक मैनबत्तीको साथ गर्भाशय र मअधिक महोत्सवको साथ धेरै लोकप्रिय छ। क्रीम राहतले Evema को उपस्थितिमा राम्रोसँग मद्दत गर्दछ। उनीसँग एउटा लामो गर्भावस्थामा छ, उनी गर्भावस्थाको मेरो दोस्रो आधामा उठिन्। जेनिनिकटसले सिफारिस गरेकी थिइन र राहतको मैनबत्तीहरू वा अग्रिम राहतको मलहम गर्न सिफारिस गरे।
हेमोरहोलिडबाट गर्भावस्था र महोत्तर rif को समयमा धेरै लोकप्रिय छ। प्राकृतिक संरचनाले बाहिर्टिंग र पीडा, निर्देशनहरू प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ। गर्भावस्थाको बखत महिलाको शरीर धेरै परिवर्तन हुन्छ। गर्भाशयको नियमित बृद्धिका कारण, शरीर गर्भावस्थाको बखत बत्ती र महोत्तर राहतको उपचार प्रदान गर्दछ।
ट्यागहरू: हेमोरहोलिडहरू लेमोरहोलिडस्कोल मूल्यबाट मर्मत, हेमोरुडबाट हेमोरुडबाट, इचिताेल मर्मतबाट हेक्थोल मर्मतबाट मद्दत गर्दछ।
गर्जनको समयमा हेमोररोइड क्रीम